ပရိဘောဂ - iHome ► Shopping Time
မူလသို > အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်း>ပရိဘောဂ
ကုန်ပစ္စည်း 262 ခု ရှိပါသည်
No. H001 size - 27 x 17 x 10 cm
No. H002 size - 23.5 x 23.5 x 15 cm
No. 610 size - 26 x 17 x 15 cm
No. 680 size - 33 x 33 x 45 cm
No. 682 size - 33 x 33 x 45 cm
No. 601 size - 33 x 33 x 45 cm
No. 0715 size - 48 x 43 x 65 cm
No. 821BA/3 size - 70 x 50 x 50.5 cm
No. 601 size - 45 x 54 x 82.5 cm
မော်တာဖြင့် အဖွင့်အပိတ်လုပ်နိုင်သော သံပန်းအော်တို တံခါးပဲ ဖြစ်ပါသည် ။
ခိုင်ခန့်ပီးသပ်ရပ်သော စတီးဘာဂျာ တံခါး ပဲဖြစ်ပါသည် ။
(၄)ဆင့် ဖိနပ်စင် (1) အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောကော်သားနှင့်ပြုလုပ်ထားခြင်း။ (2) ဘေးအကာမှာ ( ပလတ်စတစ် ) အထူသားဖြစ်သောကြောင့် ပိုခိုင်ခံ့ခြင်း။ (3) အညစ်အကြေးများစွန်းထင်းခြင်းမရှိခြင်း ၊ သေသပ်လှပသော ဒီဇိုင်းဖြစ်ခြင်း။ (4) တစ်ခြား ဖိနပ်စင်များထက် ပိုမိုခိုင်ခံ့ခြင်း။
(5) ဆင့် ဖိနပ်စင်
(၅)ဆင့် ဖိနပ်စင် (1) စတီးတိုင်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း (2) ဘေးအကာမှာ ( ဂျင်း ) သားဖြစ်သောကြောင့် ပိုခိုင်ခံ့ခြင်း (3) ဘေးအိတ်တွေပါရှိခြင်း ၊ သေသပ်လှပသော ဒီဇိုင်းဖြစ်ခြင်း (4) တစ်ခြား ဖိနပ်စင်များထက် ပိုမိုခိုင်ခံ့ခြင်း
(၅)ဆင့် ဖိနပ်စင် (1) အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောကော်သားနှင့်ပြုလုပ်ထားခြင်း။ (2) ဘေးအကာမှာ ( ပလတ်စတစ် ) အထူသားဖြစ်သောကြောင့် ပိုခိုင်ခံ့ခြင်း။ (3) အညစ်အကြေးများစွန်းထင်းခြင်းမရှိခြင်း ၊ သေသပ်လှပသော ဒီဇိုင်းဖြစ်ခြင်း။ (4) တစ်ခြား ဖိနပ်စင်များထက် ပိုမိုခိုင်ခံ့ခြင်း။
(၆)ဆင့် ဖိနပ်စင် (1) စတီးတိုင်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း။ (2) ဘေးအကာမှာ ( ပလတ်စတစ် ) အထူသားဖြစ်သောကြောင့် ပိုခိုင်ခံ့ခြင်း။ (3) အညစ်အကြေးများစွန်းထင်းခြင်းမရှိခြင်း ၊ သေသပ်လှပသော ဒီဇိုင်းဖြစ်ခြင်း။ (4) တစ်ခြား ဖိနပ်စင်များထက် ပိုမိုခိုင်ခံ့ခြင်း။
(၅)ဆင့် ဖိနပ်စင် (1) စတီးတိုင်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း။ (2) ဘေးအကာမှာ ( ပလတ်စတစ် ) အထူသားဖြစ်သောကြောင့် ပိုခိုင်ခံ့ခြင်း။ (3) အညစ်အကြေးများစွန်းထင်းခြင်းမရှိခြင်း ၊ သေသပ်လှပသော ဒီဇိုင်းဖြစ်ခြင်း။ (4) တစ်ခြား ဖိနပ်စင်များထက် ပိုမိုခိုင်ခံ့ခြင်း။
ရာသီဥတုမရွေး အသုံးပြုနိုင်မဲ့ အ၀တ်ဗီရို (1) အ၀တ်များအား နေရာလွတ်လပ်စွာ ထားနိုင်ခြင်း (2) ခိုင်ခံပြီး ပေါ့ပါးလွယ်ကူစွာ သယ်ဆောင်နိုင်ခြင်း (3) အချိန်ကြာရှည်စွာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
Cabinet Size Small လွယ်ကူစွာဖြုတ်တပ်ရလွယ်တဲ့ ပိတ်ဘီဒိုလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လက်ဆောင်ပဲပေးပေး တကိုယ်ရေပဲသုံးသုံး အဆောင်နေတဲ့လူပဲသုံးသုံး ကျောင်းသူတွေပဲသုံးသုံး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ နေရာမစားတဲ့ ဘီဒိုလေးဖြစ်ပြိးမလိုချင်ရင်ပြန်ဖြုတ်သိမ်းသွားရုံပါပဲနော်။
Folding Table လွယ်ကူစွာခေါကိသိမ်းအသုံးပြုနိုင်ပြီး ပေါ့ပါးတဲ့အတွက်အလွယ်တကူခေါက်ပီးသယ်ယူလို့ရပါတယ်။စာပဲကြည့်ုကြည့် ထမင်းပဲစားစား laptop ပဲသုံးသုံးအဆင်ပြေပါတယ်ရှင်။
သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီး အသုးံပြုရ အဆင်ပြေစေသော ခေါက်သိမ်း စားပွဲ ပဲဖြစ်ပါသည် ။
၇ဆင့် ဖိနပ်စင် (1) စတီးတိုင်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း (2) ဘေးအကာမှာ ( ဂျင်း ) သားဖြစ်သောကြောင့် ပိုခိုင်ခံ့ခြင်း (3) ဘေးအိတ်တွေပါရှိခြင်း ၊ သေသပ်လှပသော ဒီဇိုင်းဖြစ်ခြင်း (4) တစ်ခြား ဖိနပ်စင်များထက် ပိုမိုခိုင်ခံ့ခြင်း